हिरोशिमा देखि क्योटो सम्म - कसरि हिरोशिमा देखि क्योटो सम्म जाए? - Samurai and Ninja in Japan
हिरोशिमा देखि क्योटो सम्म – कसरि हिरोशिमा देखि क्योटो सम्म जाए?
हिरोशिमाबाट क्योटोमा कसरी जाने? Shinkansen छिटो रेल र अन्य ट्रांसटिनटिन विकल्पहरू
हिरोशिमा देखि क्योटो सम्म जाने को बेहतरीन तरीका शंकसेन्सन छिटो रेल छ। शंकसेन्सेन फास्ट ट्रान्स (हिरोशिमा क्योटो) को लागत एकै दिशाको लागि ¥ 10570 हो । राउण्ड ट्रिपको लागि लागत लगभग 27200 छ । हिरोशिमा क्योटोमा Shinkansen सवारी लगभग 1 घण्टा र 40 मिनेट छ । पहिलो शंकसेन्सन छिटो तालिम 6:00 पूर्वाह्न हिरोशिमा देखि प्रस्थान गर्दछ । अन्तिम शंकसेन्सन छिटो रेल हिरोशिमा देखि 1 9:58 बजे सम्म प्रस्थान गर्दछ। त्यहाँ हरेक 20 मिनेटमा शंकसेन्सन बुलेट रेल सेवा हो । तपाइँ अनलाइन रिजर्भ गर्न सक्नुहुनेछ तर यो स्टेशनमा टिकट खरीद गर्न अधिक सुविधाजनक छ।
हिरोशिमा देखि क्योटो सम्म Shinkansen फास्ट रेलवे
Shinkansen छिटो रेल को एक लक्जरी सेक्शन छ। यो खण्डको नाम “हरियो कार” हो। तपाई यो विशेष खण्ड जेआर-PASS सँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईंले थप तिर्नु भएको छ भने तपाईं “हरा कार” प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यात्रा गर्ने सस्तो तरीका बस लिनको लागि हो। आधी रात सम्म बस सेवा छ। बसको लागत अनुमानित ¥ 4800 ~ ¥ 6100 हो। अधिकांश मानिसहरू बस छनौट गर्दैन किनकि यो शंकसेन्सन बुलेट रेल भन्दा3गुणा कम छ। बसको तालिका जाँच गर्न कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Categoriesब्लग Nepali TagsShinkansen बाट यात्रा गर्ने, क्योटो, जापान, जापान परिवहन, जापानमा यात्रा, बुउलेट ट्रेन्स, हिरोशिमा, हिरोशिमा देखि क्योटो सम्म कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? फास्ट रेलगाडी